Madaxweynaha Koonfur galbeed Shariif Xasan oo maanta gaaray Xudur – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Koonfur galbeed Shariif Xasan oo maanta gaaray Xudur
Hoggaamiyaha Maamulka KMG ee Koonfur galbeed Soomaaliya Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wafdi balaaran oo uu horkacayo ayaa maanta gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, iyadoo si diiran loogu soo dhoweeyay halkaasi.
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo garoonka diyaaradaha ee Xudur kula hadlay boqolaal dadweyne ah oo soo dhoweynaayay wafdigiisa ayaa sheegay in u jeedada imaatankiisa Xudur ay la xiriirto sidii uu u ogaan lahaa xaaladda dhabta ah oo ka jirta gobolka Bakool gaar ahaan magaalada Xudur.
Mas’uuliyiinta gobolka, saraakiisha ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISMO ayaa sidoo kale qeyb ka ahaa soo dhoweynta wafdiga Hoggaamiyaha maamulka KMG ee Koonfur galbeed Mudane Shariif Xasan,waxaana Wafdigiisa kamid ahaa qaar kamid ah odayaashii dhisay maamulka KMG ee Koonfur galbeed, xubno ka tirsan Ururka Haweenka ee Koonfur galbeed iyo mas’uuliyiin kale.
Soo dhoweyn ka dib ayaa wafdiga waxaa loo gelbiyay gudaha magaalada gaar ahaan xarunta maamulka halkaas oo uu kulamo kula yeeshay maamulka gobolka Bakool iyo saraakiisha ciidanka Xoogga iyo AMISOM isagoo ka xog wareystay xaaladaha Amni iyo tan Insaaniyadda ee ka jirta guud ahaan gobolka Bakool maadaama Xudur iyo magaalooyinka kale oo Al-shabaab laga saaray ay go’doomiyeen.
Booqashadii ugu horeysay oo Hoggaamiyaha Maamulka KMG ee Koonfur galbeed uu ku tago magaalada Xudur tan iyo markii dhowaan loo doortay Hoggaamiyaha Maamulka Koonfurgalbeed Soomaaliya.
Barnaamijka kulanka Todobaadka oo lagu falanqeeyay soo bandhigistii dhagarqabe Xasan Xanafi (Dhageyso)
Guddiga Qabanqaabada Doorashadda Rugta Ganacsiga Puntland oo Shaaciyay Shirkadaha ka Qaybgalaya Doorashadda iyo Shuruudaha Musharixinta.